दाजुभाई मिलेर भाउजुलाई चिकेको कथा | Miracle Nepal
तिन बर्षको अन्तरालमा बिदेशको बसाई सकेर म गाउ आइपुगेको थिएँ । आज मेरो हितैसि दाजु भाउजुको घरमा भेटघाटको लागि बस्ने गरेर जाँदै थिंएँ । म बिदेश जाने बेला दाईको भक्खर बिहे भाको थियो । रिमा भाउजुसँग सङ्गत भाको तिन महिनामै म बिदेसिएको थिएँ । त्यति बेला म २० बर्षको थिएँ । भाउजु पनि त्यस्तै २० बर्षको थिइन् । भाउजुको मस्त जवानि देख्दा दाईप्रति पनि डाह लागेको थियो । देवर भाउजु नातामा जिस्किनु र इत्रिनु सजिलै थियो । सारै मिठो जिस्किन जान्ने थिइन् । भाउजु साह्रै कामुक लागेको थियो मलाई त्यतिबेला । चार बर्षपछि रिमा भाउजु कस्ती भईन होली मलाई खूल्दुलि लागिरहेको थियो ।
भाउजुलाई सारी र दाईलाई ज्याकेट उपहार लिएर म बेलुकी छ बजेतिर त्यहा पुगेको थिएँ । भाउजु त झन् बैंशले अनमत्थ भएकि रहिछन् । पहिले भन्दापनि मोटाएकी चिल्लो र पुस्ट शरिर बाहिरैबाटै छलछल्ती देखिने ठूला-ठूला दूध, ढ्याप्प उठेको चाक हेर्दै लोभ लाग्दो, मुसारि हालुम जस्तो नाङ्गो पारेर रहर पुगुन्जेल हेरिरहुँ जस्तो, चुमि हालूँ जस्तो प्रत्येक अंगअंगमा, मुसारि रहुँ जस्तो लाउने त्यो ठूलो ठूलो चाक र दूधहरु । मेरो बैंशले मलाई उनि प्रतिको मोह ह्वात्तै बढायो । मेरो लोभि आँखाले गिद्दे नजर लगाएर हेर्न थालिहालें सेक्सि भाउजुलाई । हेर्दै दुईतिन जना केटा चाहिने जस्तै, बैंशले गोरु खोज्न गाउँ चहार्ने कोरली गाई जस्तै । उनको आफ्नो अंगतिरको मेरो लोभि नजर थाहा पाएकी थिइन् अनि मस्किन थालिसकेकि थिईन । शायद यसरी म जस्तै अरु कयौँले हेर्छन् होला भाउजुलाई ।
मन थाम्दै कुरा गर्न लागेँ । शुरुभेट औपचारिक्तामा बित्यो । मेरो उपहार दुबै जनाले धरै मन पराई दिनुभयो । केहि छिनको रमाईलो भलाकुसारीपछि दाई मासु-रक्सिको ब्यबस्था गर्न पसलतिर लाग्नुभयो । पसल झन्डै १५-२० मिनेट टाढा थियो । त्यसपछि हामि दुई मात्र भयौं त्यो एकान्त घरमा । जिस्किने चल्ने काम हुन थाल्यो हाम्रो । दाजु–भाउजुको अहिलेसम्म बच्चा न'भाको मलाई राम्ररी थाहा थियो । “भाउजु, तपाई त पहिले भन्दा राम्रि हुनुभएछ । मोटाएर चिटिक्कको हुनुभएछ । पहिले बरु अलि पातलि हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।” केटि लठ्याउने पहिलो फर्मूला प्रशंसाबाट शुरु गरें । “देवरजिको हेराइ राम्रो भएर होला नि म राम्री देखिएकि ।” भाउजु मस्किदै बोल्न थालिन् । उसको मुस्काने छड्के हेराईले मलाई भुत्तुकै पार्न थालेको थियो ।
“के हो देवरजी बिदेश बसेर तपाईपनि त ह्यान्डसम हुनुभएछ नि । अबचाहिँ देउरानि नल्याई नहोला जस्तो छ नि !” भाउजु झन् के कम, जिस्किनमा मभन्दा फस्ट क्लास नै थिई । “कस्तो जान्ने मेरो भाउजु देवरको मनको कुरा, अब चाहि बिहा नगरी नहोला जस्तो छ । बैशमा नगरे कैले गर्ने त हैन र भाउजु?” मैले पनि ठाउँ पाउने बित्तिकै घोंचिहालें ठाउमै ।
मेरो कुरा सुनेर भाउजु लाजले भुत्तुकै हुनुभयो । मैले प्रसङ्ग थप्दै गएँ - के हो दाजु भाउजुलाई बच्चाको रहर न'भाको हो कि क्या हो? “खै दाईलाइ नै सोध्नु ह्यान्डसम देवरजी मलाइ त कति रहर थियो नि ।” भाउजुले छेड्नु भो दाइतिर । मैले गिज्याउँदै भनेँ - “खै तपाईहरुसँगै सुत्नु हुन्नकि क्याहो जहिलै झगडा गरेर ।” मैले सुत्नेको कुरासम्म गरेर भाउजुलाई इम्प्रेस बनाउने सुर कसेँ । मेरो कुराले भाउजु रातोपिरो हुँदै भन्नुभयो - “ह्या देवर पनि, कैलेकाई पो झगडा हुन्छ । सधैं यत्रो बर्ष अलग्गै बस्न सकिन्छ कोई ? अझ भइन भनेर छोरा मान्छेहरू, तपाई सक्नुहुन्थ्यो र ?” भाउजुले मलाई झन सजिलो पार्दै गजबले कुरा गरिन् । जिस्किने मौका यहीँ हो भन्दै म झन् जिस्किन थालेँ - “खै भाउजु अहिलेसम्म भर्जिननै छु कसैले पत्याउनन् । अर्काको राम्रीराम्री बुढी देखेर थुक निल्दै बसिराछु आकाशको फल आँखातरि मर भनेझैँ आफु त !” बिचरा देबरजी, मेरो देबरलाई छिट्टै राम्रो देउरानी भेट होस् । नत्र त देवरजीको जवानी खेरै जान्छ ।” भाउजु झन् झन् मस्किन थाली । हो त नि भाउजु, मलाई पनि जवानी त्यसै खेर गइराकोमा अपशोच भैराछ । यसो भाउजु जस्तै राम्री केटी पाए उसैलाई पोख्ने भनेको कोई फेला परिन । पाए त भाउजुलाई नै पोख्न पाए हुन्थ्यो भन्न मन लागेको थियो नि के गर्नु आँट मरिगए आँट आएन । त्यहीँ बेला जिस्किँदा जिस्किँदै दाई टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो । भाउजुसँगको छाडा गफले ठन्केको लाँडो पनि सुत्यो अब । त्यसपछि दाईसँग गफ सुरु भयो । भाउजु मासु भात बनाउन भान्सातिर लाग्नुभयो । दाईसँग गफै गफमा खानेकुरा तयार भो । ह्विस्कि र मासुको स्वाद अनि भाउजुसँगको साथमा रातको ११ बजेको पत्तै भएन ।
खाना खाईसकेपछि “ल भाई म सुत्न गएँ, तँ पनि सुत है” भन्दै हरिदाई माथिल्लो तलाको बेडरुमतिर जानुभयो । भाउजु भने आउनुस् हजुरलाई म बेड बनाइदिन्छु भन्दै सिरक लिएर कोठीतिर लम्किन् । म भाउजुलाई उछेनेर अगाडी गएँ र ढोकाको कुनामा लुकेर बसेँ । भाउजु कोठामा छिर्ने बित्तिकै झ्याल्लास् भनेर जानाजानी भाउजुको दुइटै दूध समाइदिएँ र झुक्किएर खुट्टा अल्झिएझैँ गरेर भाउजुलाई बेस्सरी धक्का दिएँ । भाउजु भुँईमा गर्लामै पल्टिन र म पनि भाउजुको माथी जानिजानि झुक्किएझै गरेर घोँडा चढिदिएँ । भाउजु लजाउँदै बोलिन - के हो देवर जी जवानी जवानी उम्लिएर हो क्याहो भाउजुकै माथी खप्टिन आउने । म झन् बलियोसँग भाउजुको तल्लो भागमा मेरो तल्लो भाग रगड्दै बोलेँ - के गर्नु तनी अब यति राम्री भाउजुलाई देखेर सम्हाल्नै सकिन । मैले भाउजुलाई अंगालो मार्दै ठूलो ठूलो दूध समाइदिन लागेँ । भाउजु रातो पिरो हुँदै उठ्न लाउनुभयो । मैले झन् बलियोसँग भाउजुको पुतिको सिदा मेरो लाडो लगेर थिच्दै भनेँ - अब यो देवरको पन्जामा परेपछि भाउजु त्यसै काँ उम्किन पाउनुहोला र । भाउजु लजाउँदै बोल्नुभयो - छि ! कस्तो के तपाईं त । दाईले देख्यो भने मार्ला नि फेरि । मैले यसो उठेर हेरेँ र ढोकाको गजबार लगाउँदै भनेँ - आ… थाहा पाउँदैनन् निदाइसके । भनेर फेरि भाउजुको माथी खप्टिएर झन् मजाले दूध मसार्दै ओँठमा किस गर्न थालेँ । भाउजुले छि कस्तो देवर आफ्नै भाउजुलाई यस्तो गर्ने हुन्छ, अरुलाई पो गर्ने हो त ।" मैले इमोसनमा आएर भाउजुको दूध मसार्दै भनेँ । अरुलाई किन गर्ने आफ्नै भाउजु यति सेक्सी र हट हुँदाहुँदै । मलाई पनि चाख्न दिनु न है कस्तो हुने रैछ भनेर मुख फोरिहालेँ । भाउजु चुप लाउनुभयो । मैले भाउजुलाई उचालेर खाटमा राखेँ र सम्झाउँदै भने - "भाउजु नरिसाउनु है मैले त हजुरको यति दामी माल देखेर आफूलाई समाल्नै सकिन । एकैछिन त हो, म काम गर्छु है । कस्तो गर्न मन लाछ के, प्लिज एकचोटि हजुरको चाख्छु ल !"
भाउजुको छातिमा दूध समाउँदा भाउजुको मुटुको धड्कन एक्कासी बढेको भान भयो । भाउजुले "ह्या तपाईं पनि… आफ्नै दाईको जुठो पनि खानेँ, गाउँतिर चोखो खोज्न जानून, पाप लाउँछ क्या आफ्नै भाउजुलाई त…" भनी । म ठुस्किएर ल ल ठिकै छ छुन्न तनी भनेर उठ्न खोजेँ तर भाउजुले मलाई च्याप्प समाएर मेरो ओठ मजाले चुसिदिनुभयो । अब भने बल्ल म संसार जितेको महसुस गर्न थालेँ । अघिनैदेखि भाउजुसँग छाडा बोल्दा कसरी हुन्छ फकाएर भाउजुलाई चिक्न पाए हुन्थ्यो भैराको थियो साँच्चै अजिङ्गरको आहारा दैवले जुराइदियो ।
त्यसपछि मलाई पनि आँट आयो अनि तुरुन्तै उनको ओंठमा मेरो जिब्रो छिराई हालें । भाउजुले मेरो जिब्रो मजाले चुसिन् । बिस्तारै मेरो लाँडो छाम्न थाल्नुभयो । मेरो लाँडो अघिनै ठन्कि सकेको थियो । भाउजुले छाम्दा त झन् खपि नसक्नु भयो । तुरुन्तै मैले प्यान्ट खोलेर मेरो ठन्केको लाँडो के झिकेको मात्रै थिएँ भाउजुले जिब्रो निकाल्दै भनिन् “आम्मामा, कत्रो ठूलो हो भन्याँ ? के खाएर बनाउनुभाथ्यो यत्रो ? ओहो ! राम राम काठ जत्तिकै सारो पनि !”
यसो भन्दै मेरो लाँडो सुम्सुम्याउन थालिन र क्वाप्प मुखमा हालेर चुस्न पो थालिन । मलाई त यत्ति मजा आयो कि बर्णननै गर्न सक्तिनँ । च्युप च्युप गर्दै भाउजुले खुब मीठो मान्दै मेरो लाँडो चुस्नु भयो । मलाई अब खपि नसक्नु भयो अनि भाउजुको सबै कपडा उतारिदिनँ लागेँ तर लजाएर पेटीकोट खोल्न मान्नुभएन । मैले सबै खोल्नुन भाउजु भनेको मलाई जाडो भयो भन्नुभयो । मैलै जाडो साडोको कुरा छोड्नु ह्याँ मेरो लाडो ठाडो भयो भने पेटीकोट फुकालेर पल मिल्काइदिएँ र भाउजुलाई सिरदेखी पाउसम्म हेर्न थालेँ ।
आज म मेरो सेक्सी भाउजुलाई यति मजाले चिक्छु कि जीन्दगीभर याद गर्नुहुने छ । त्यसपछि भाउजुको पुतीमा हात लगेको पुत्ति त अघिनै ल्याफ ल्याफ्ती भइसकेछ पानी निस्किएर । कस्तो भुक्क परेको पुती, नचिके नि चिकौँ चिकौँ लाग्ने । मैले भाउजुलाई स्वाङ पारेर सोधेँ । के गरम भाउजु गरम कि नगरम ? भाउजुलाई पनि खपि नसक्नु भएछ क्यार भलाकुसारी छाँटिराख्ने कि हाल्ने पनि भन्नुभयो । मेरो पालि भाउजुको पुतीभित्र मेरो लाँडो ल्वाम्मै छिराइदिएँ । “ऐया ! उहुहुहु… उफ्फ… कति बलियोसँग हालेको हाल्न पायो भनेर भाउजु गुनगुन गर्न लाउनुभयो । मैले ल्वाम ल्वाम चिक्न थालेँ । भाउजु उम्म… उम्म… स्सस्स… आह्ह… इस्स्स… आह्ह… कस्तो मजा हुने रैछ ठूलोले त !" भाउजु बिस्तारै बोलिन । मलाई झन् कस्तो मजा आयो । अनि ल्वाम कि ल्वाम चिक्न थालेँ । चिप्लो त ल्याफ ल्याफ्ती भएर आयो । कस्तो तातो भित्र छिराउदा त ! ल्वाम… ल्वाम… चिक्न थालेपछि क्ल्वाट… क्ल्वाट… क्ल्वाट… आवज आउन थाल्यो । त्यसको माथी भाउजुको मुखबाट निस्किरहेको आह्ह… आह्ह… उम्म… उम्म… को आवजले मलाई स्विर्गिय आनन्द दिलायो । पाँच दस मिनेटपछि मेरो फुसी झर्न लाग्यो मैले भाउजुलाई - "मेरो त झर्न लाग्यो के गरौं भनेर सोधेँ । उनले भित्रै झार्न भनिन् । मलाई पनि लाडो निकाल्न मन लागिरहेको थिएन ढुङ्गा खोज्दा देउता मिलेझैँ भयो । एकैछिनमा मलाई छुट्टै संसारमा भएझैँ आनन्द आउन लाग्यो । मेरो लाँडो भित्रबाट सनन फुसी आउन थाल्यो । आह्ह… आ… आ… आह् आह… आह्ह्ह… आह्ह्ह… उम्म… चिरिक्क चिरिक्क भाउजुको पुतिभित्र मेरो फुसी झर्न थाल्यो । उनि पनि स्वर्गीय आनन्द मान्दै थिईन । अम्म… आह्ह… आह्ह… आह्ह… भन्दै उनले पनि फुसि झारी । फुसि झरेपछि पनि मैले एकछिन लवाम... ल्वाम... चिकिरहेँ । मेरो फुसी ल्याच ल्याच भयो । अनि लाँडो बाहिर निकालेर भाउजुको माथी एकछिन लम्पसार परेर बसेँ । भाउजुले मलाई मायाँ गरेर कपाल छुम्सुम्याउँदै जताततै किस गर्न लाउनुभयो । एकछिन पनि भाउजुले अब उठ्ने हैन के भनुम् देवर भनम् भने सबै लपेटिहाल्नुभयो । मैले जे दाईको अगाडी देवर भन्नु गर्ने बेला बुढो भन्नु सकिहाल्यो नि भने । खितित्त हाँस्दै धत् पागल, सोझी भाउजुको मति बिगार्दिनुभयो क्यारे अझै नि पुगिन भन्दै उनले मेरो कान समाई । मैले छैन भनेर फेरि भाउजुको पुतीमा लाडो हालेर चिक्न थालेँ । भाउजु पनि आँखा चिम्म गरेर थापिराख्नु भयो र पाँच दस मिनेट फेरि पनि दुइजनाकै अलिअलि फुसि झर्यो । भाउजुले मलाई कक्रक्क पारेर समाइराख्नुभएको थियो । मैले भाउजुको दूधमा हल्का टोकिदिएपछि इस्स्स… अह्ह्ह… भन्दै खुब आनन्द मान्नुभयो । भाउजुले एकछिन पछि ल ल भयो अब यो पागलको फटाह देवरसँग बसेपछि टाइम गाको थाहै नहुने रैछ । ल ल अब उठ्नु छिटो भन्नुभयो । मैले म भाउजुलाई तिमी साइनो लगाउँदै भनेँ - म तिम्रो को हो, साइनो छैन भने । भाउजुले लजाउँदै ए मेरो राजा, एक दुई घण्टाको स्वामी राजा अब म आफ्नो सयन कक्षमा सवार हुनुपर्यो उठिबक्स्यौस् भन्नुभयो । मैले गालामा टोकिँदिदै पुतीमा एकचोटि लाँडो ठोसेर भाउजुको घोँडाबाट ओल्लिएँ ।
भाउजु कपडा लगाएर - ल म अहिले जान्छु पछि कुरा गरम्ला है भन्दै मलाई कोठामा छोडेर आफ्नो कोठातिर लाग्नुभयो । मलाई भने गह्रौँ भारि बिसाएझै भो । धेरै पहलपछि बल्ल आज सेक्सी भाउजुलाई चिक्न पाएँ तर मलाई सपना जस्तो लाग्दै थियो । मनमा कुरा खेल्न थाल्यो “किन भाउजुले दाई हुँदा हुँदै म सँग सेक्स गरिन ? किन दाई घरै हुँदा पनि किन डराईनन् ? कतै दाईसँग सन्तुष्ट नभएर त त हैन ?” यस्तै यस्तै मनमा कुरा खेल्न थाल्यो ।
मलाई कत्ती पनि निन्द्रा लागिरहेको थिएन छट्पटी लागिरहेको थियो । केही छिन पहिलाको भाउजुसङ्गको चिकामारीको झल्झली याद आईरहेको थियो । मेरो त लाँडो फेरि ठन्कियो । फेरि भाउजुलाई चिक्न मन लाग्न थाल्यो । फेरि भाउजु यहाँ कुनै बहाना लिएर आएपनि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्न थाल्यो । निकै खट्पट लाग्न थाल्यो । एकचोटि दाईको कोठा पो चिहाउन मन लाग्यो कतै दाईले भाउजुलाई चिक्दै त हुनुहुन्न ? अरुले चिकेको हेर्न झन् मजा आउँछ भन्थे साथिहरु ! मन थाम्नै सकिन अनि बिस्तारै उठेर दाई र भाउजु सुत्ने कोठातर्फ गएँ । गफ गरे जस्तो आवाज आउदै थियो भित्रबाट । बिस्तारै ढोकामा कान थापें । गफ प्रस्टै सुनिदै थियो । ध्यान दिन थालें । दाई भन्दै थियो “के हो आज त टन्न चिप्लो आइसकेछ त ! आज चै मजा हुने भो !” सायद पुति छाम्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला । आज अलि सेक्सि भाकिछु क्या बियर खाएर हो कि ! भाउजु जिस्किनुभो । “कि देवरको कसिलो जिउ देखेर हो ?” दाई पनि जिस्किनु भो । “हो जस्तो छ, खै तपाईले कहिल्यै मलाई धित पुर्याउन सक्नु भएन क्यारे अनि बच्चा पनि भएन !” “के गर्नु छिटो झरिहाल्छ दुई जनाले पालो पालो चिके त पुग्थ्यो होला है तिमिलाई ब्लु फिल्ममा जस्तै हगि ? दाईले भन्नुभयो ।” “कि बोलाउने त देवरलाई तपाई जस्तै छ । बच्चा भैहाल्यो भने पनि तपाईकै भन्लान नि है" भाउजुले आँट गर्नु भयो । “धत्, कसरीी सम्भब होला र ! लाज लागिहाल्छ नि !” दाई डराउनु भयो । त्यो कुरा सुनिसकेपछि मलाई खपिनसक्नु भयो । मलाई पनि त्यसरी ग्रुपमा चिक्दा कस्तो रमाईलो होला भनेर कल्पना गर्थें आज पूरा होला जस्तो छ । कोठा भित्र चियाउने ठाउ खोजें । ढोकाको काप खुकुलो रहेछ । त्यहाँबाट सजिलै भित्रको सबै चिज देख्न सकिने रहेछ । भित्र हेरेको त दाईभाउजु दुबै जना नांगै लाडो पुति र छामा छाम गर्दै रहेछन् । दाईको लाडो मेरो जत्रो र कडा थिएन । मलाई लागि हाल्यो अब भाउजुलाई मेरो लाडोको तिर्सना हुन थालेको छ । मलाई खपिनसक्नु भो ! लाडो ठन्किएर हन्हनि भो! मलाई बउला आँट आयो । ढोका ढकढक्याएँ “दाई ! ढोका खोल्नु न !” मैले भनें ।
दाजु भाउजु हतारमा ओड्नेले जिउ छोप्नु भयो ।
“किन सुरज, के पर्यो” भित्रबाट दाई बोल्नु भयो ।
“एउटा कुरा गर्नु पर्ने भो, एकछिन ढोका खोल्नु न !” मैले फेरि अनुरोध गरें । त्यसपछि भाउजुले म्याक्सि ख्वात्त लाउनु भो अनि ढोका खोल्नु भयो । अनि म भित्र पसें । दाईले शंका गर्दै ल भन - यतिखेर के को कुरा भन्न आईस ? मैले भनेँ - “हो दाई यतिखेरकै कुरा हो ।” तिमिले हाम्रो कुरा सुन्यौ कि क्या हो ? दाईले सोध्नु भयो । हो दाई सबै सुनेँ, मलाई खपि नसक्नु भयो । हेर्नु न दाई भनेर मेरो ठन्केको लाडो ल्वात्त निकालेर नेपारिदिएँ । मलाई डर थिएन अघिनैको बार्तालाब सुनेर मेरो लाडो देख्ने बित्तिकै भाउजु लोभिनु भो “आम्मै कत्रो !” दाई अक्क न बक्क हुनु भयो । दाई प्लिज एकचोटि भाउजुलाई गर्न दिनु न म है भनेर अनुरोध गर्न थालें । “लू, त नि आज मज्जाले इङ्लिस पाराले गरुम हुन्छ रिमा ?” दाई पनि जोसिनु भो भाउजु नमान्ने कुरै भएन । भाउजु एक्कै चोटि म भाको ठाउमा आउनु भयो अनि मेरो लाडो च्याप्प समाएर हुरुक्क हुनु भई । भाउजुको मद्होस उत्तेजनाले मलाई खपिनसक्नु भयो । मेरो पालि भाउजुको दूध मजाले मुसार्न थालें । “दाई, भाउजुको म्याक्सि खोलौं ?” मैले अनुमति मागें । त्यसपछि दाई पनि जोसिनु भयो । "हुन्छ खोल खोल, आज मोज गर तेरो भाउजुसँग" यसो भन्दै दाईले ओड्ने हटाउदै लाडो ठन्काएर आफैले खेलाउन थाल्नु भयो । अब भने केहि डर भएन । मैले भाउजुको म्याक्सि खोलेर पुस्ट चाक र गठिलो दूध चुस्न थालें ।
भाउजु आँखा चिम्लिदै उम्म… अह्ह… ओउह… उम्म्म… देवरजी के गर्नु भो नि मरें म त भन्दै मेरो लाडो हातले तलमाथि गरेर खेलाउन थाल्नुभयो ।
मलाई पनि झन् ईमोसन आउन थाल्यो । भाउजुलाई मुखमा किस गर्न थालें । भाउजुको शरिरको एक एक सम्वेदनशिल अंगहरु निकै इमोसनमा आएर सुम्सुम्याउन थालें । मैले दाइलाई फुर्क्याउँदै भनेँ - “दाई, यस्तो सेक्सी भाउजु पाउनुभा'को हजुर त साँच्चै भाग्यमानि हो । हेर्नू त आम्मामामा कस्तो अंगालिराखम् जस्तो लाग्ने पुस्ट जिउ, चुसिराखुम जस्तो लाग्ने गठिदो दूध, चिकेर कहिल्यै नअघाउने जस्तो पोटिलो भुक्क परेको बाख्रे पुति… आहा यस्तो पो त बुरी भनेको त ।” भाउजुको प्रशंशा गरेकोले दाईलाई पनि भाउजुप्रति ईमोशन आएछ क्यार जोसिएर हामि भएको ठाउँमा आएर भाउजुको दूध मुसार्न थाल्नु भयो । भाउजुले अर्को हातले दाईको लाडो खेलाउन थाल्नु भयो । त्यसपछि दुबै मिलेर भाउजुको एक एकवटा दूध चुस्न थाल्यौं । भाउजुलाई पनि एकदम मजा आएछ क्यार थपक्क भुईमा बसेर पालैपालो हाम्रो लाडो चुस्न थाल्नुभयो ।
“साह्रै मजा आउँदो रहेछ यसरी त सुरज !” मलाई यसो भन्दै दाई झन् जोसिनु भयो । “हैन आज हजुरको लाडो पनि कस्तो कसिलो भाको हो” भाउजु छक्क पर्दै दाईको लाडो चुस्दै अनि एउटा हातले मेरो नेपार्दै थिई । “हो त साह्रै मुड आयो आज त खै तिम्रो पुति छामौं भन्दै दाईले भाउजुलाई उठाउनु भयो ।ओहो ! तिमि त ल्याफ्फै भएछौ नि त !” दाई छक्क पर्दैहुनु हुन्थ्यो ।
दाईले अगाडिबाट भाउजुको टिसि खेलाउन थाल्नु भयो । म भने पछाडिबाट चाक मुसार्दै टोक्दै थिएँ । भाउजुले "लौ न मलाई खपिनसक्नु भयो छिटो चिक्नु न एकजनाले भन्दै आँखा चिम्लिदै इस्स्ह… अह्ह्ह… उफ्फ… अह्ह… कस्तो मजा भयो नि आज भन्दै थिईन । यस्तो मजा हुँदो रहेछ र पो त कुइरेहरु यसो गर्दा रहेछन ।” भाउजुलाई खपिनसक्नु भयो । दाइले भन्नुभयो - ल सुरज तैँले नै पहिले चिक तेरो भाउजुलाई आज स्वर्गमै पुग्ने गरेर । मैले त चिकि त राछु जहिले पनि” दाईले अनुमति दिनु भो । त्यसपछि भाउजुलाई खाटमा उत्तानो पारेर सुताए अनि भाउजुको पुति ल्याप ल्याप चाट्न थालें । नुनिलो चिप्लोले पुति ल्याफ्फै भैसकेको थियो । भाउजु "मरें म त लौ न नि… मरे… भन्दै कराउन थाल्नुभयो । मैले जिब्रो पुतिभित्र सम्मै घुसार्दै थिए । उनको पुति मुचुक मुचुक गर्दै थियो । मजा आएर भाउजु घरि घरि चाक जुरुक जुरुक माथि उठाउदै मेरो टाउको मुसार्दै स्वर्गिय आनन्द लुट्न थाल्नुभयो । यसो गर्दा गर्दै दाई माथि उक्लिएर इङ्लिस स्टाइलमा भाउजुको मुखमा चिक्न थाल्नु भयो ।
त्यो सिनले मलाई झन् ईमोशन आउन थाल्यो । मेरो लाडो रड जतिकै कडा भयो । मेरो पालि जुरुक्क भाउजुको चिप्लो फुल्लिएको पुतिमा ल्वाम्म घुसारें ।
“अम्म्म… आहा कस्तो मजा… कत्रो लाडो, उम्म्म… कस्तो मजा ।” भाउजुले दाईको लाडो मुखबाट झिकेर मेरो चिकाईको स्वाद लिदै तारिफ गर्न थाल्नु भो । दाईपनि मेरो लाडो भाउजुको पुतिमा छिरेको खूब मजा मान्दै नजिकैबाट हेर्न थाल्नुभयो । दाईको लाडो भाउजुको मुखैमा थियो । भाउजु भने घरि चुस्दै घरि अम्म… अम्म… उम्म… उम्म… स्सस्स्… अह्ह्ह भन्दै स्वर्गिय आनन्द लिदै थिई । दाईले औलाले भाउजुको टिसि चलाईदिंदै अनि दूध चाट्दै सहयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो । म भने भाउजुको पुतिमा ल्वाम कि ल्वाम चिक्दै थिए । मलाई पैलेको भन्दा अति मजा आइरहेको थियो । दाईले घरि घरि हातले मेरो लाडोलाई दुई औलाको कापेमा पार्दै पुतिको दुलो छेउमा राख्नुहुन्थ्यो । यसो गर्दा मलाई पनि अर्कै आनन्द आउदै थियो ।
लगातार दुइतिन मिनेट प्ल्वाट… प्ल्वाट… प्ल्वाट… क्लोटे… क्लोटे… क्लोटे… प्लिच… प्लिच… प्लिच… ट्याप… ट्याप…ट्याप… गरेर भाउजुको पुतिमा चिक्दा चिक्दै मेरो फुसी झर्न खोज्यो तर मलाई अहिलै झार्न मन थिएन । त्यसैले लुत्त लाडो झिकेर दाईलाई बोलाएँ । दाई, अब भाउजुलाई तपाई चिक्नु त अब मेरो झर्न खोज्यो । दाइले हुन्छ भन्दै ओर्लिनु भो अनि लाडो ठन्काएर भाउजुको पुतिमा ल्वाम्म घुसार्नु भो । भाउजु फेरी एक चोटि परान पर्नु भो तर दाइको भन्दा मेरो लाडोमा बढी चाई देखाइराखिन् ।भाउजु लगातार दुईटा लाडोको मजा लुटेको लुट्यै थिई । भाउजुको पुतिबाट चिप्लो आएको आयै थियो । मैले मेरो लाडो घरि स्तनको निप्पलमा रागड्दै थिए त घरि भाउजुको मुखमा कोच्दै थिएँ । यसरी हामि दाजुभाई मिलेर भाउजुलाई पालै पालो चिकिरह्यौं । आधि घन्टा जति भएपछि दाईले थाम्न सक्नुभएन । अब दाई सिलिङ तिरा टाउको उठाउदै ओह्उ… ओ माई गड…आह्ह… आह्ह… झर्यो… यास… अह्ह… भन्दै आंखा चिम्लिन थाल्नु भो । एकै छिनपछि स्वाट्ट लाडो बाहिर निकालेर चिरिक…चिरिक… भाउजुको पेट र नाईटो भरि फुसी झार्न थाल्नुभयो ।
यो सिनले मलाई पनि एकदम इमोशन आयो । मेरो लाँडो भाउजुको मूखमा थियो । मलाई पनि खपि नसक्नु भयो । भित्रैबाट सिरिङ्ग भएर आयो । मलाई भाउजुको मुखैमा झार्न मन लाग्यो । म पनि खुब आनन्द मान्दै आह्ह… आह्ह… गर्दै एकै छिनमा मेरो फुसि भाउजुको मुखमा
पिच्रित…पिच्रित… चिरिक… चिरिक… चिरिक… झार्न थालेँ । भाउजुले थाहा पाउने बित्तिकै झिक्नु हुन्छ होला भन्ठान्याँ त मेरो फुसी मिठो मानि मानि मुखभरि पारेर घुटुक्क पो निल्न थाल्नु भो । मेरो लाडो निचर्दै ल्याप ल्याप बाकि फुसि चाट्नु भयो । दाई हेरेको हेर्यै हुनुभयो । म एक छिन उठ्नै सकिन । मेरो लाडो भाउजुले मुखमै राख्नु भयो । बिस्तारै मेरो लाडो सिथिल भयो अनि म उठें ।
अब भने मलाई सपनाबाट बिपनामा आए जस्तो भयो । हामी एकअर्कालाई हेरा हेर गर्यौं र सबैजना लजायौं । भाउजु उठेर पेटको फुसि पुछ्न लागि । म चुप लागेर कोठाबाट बाहिरिन उठेको त भाउजुले थपक्क बत्ति निभाएर “यहिँ खाटमा आटिन्छ आउनु सुतौं” भन्दै दुबैलाई खाटमा लानु भयो । हामि आज्ञाकारी बनि थपक्क भाउजुलाई बिचमा राखेर सुत्यौं । हामि दुइ खट्पट गर्दै थियौं तर भाउजु लामो सन्तुस्टिको साँस तानेर स्वाँ स्वा निदाउन थाल्नुभयो । मैले रातभरि दाइ निदाएको बेलामा पनि भाउजुलाई चिकेँ ।
Miracle Nepal: दाजुभाई मिलेर भाउजुलाई चिकेको कथा